Laga soo bilaabo Miisaanka MD Barashada Odisha Tours & Travels
Namaskaar! ... iyo salaan xagga dhulka Jagannad ...
Bhubaneswar - magaalada macbadka; caasimada Odisha waa hooyadeyda. Odisha, oo ku takhasusay hidaha dhaqanka, dhaxalka dhismaha iyo qashinka qarsoon ee u dhaca si ay u noqdaan ruuxa India. Meelaha quruxda badan, calaamadaha yurub, calaamadaha soo jiidashada, goobaha duurjoogta ah iyo beeraha qaranka, xayawaannada xayawaanka ah ee xeebta Chilika ayaa si joogta ah u socdaalaya.
Waxaan soo gaadhay qadiyad aad uwanaagsan aniga iyo carruurnimadayda. Tani waxay igu dhiirigelisay inaan horumariyo warshadan oo aan baaro guul gaadhka buuxa ee si dhab ah u dhiirigalin kara fasax ama booqasho martida. Taasi waa habka ay "My Dream Children Tour" n 'Travels' (I) Pvt Ltd waxay u timid si ay u iftiimiso.
Iyada oo aan waayo-aragnimadayda iyo ka qayb-qaadashada warshadkan, waxaan heystey awoodda aan ku ururiyo koox ka mid ah shaqaale aad u heer sare ah oo khibrad leh oo si fiican uga gudbi doona waajibaadkooda si ay u soo bandhigaan martida booqashada ugu fiican ee safarka. Maanta waxaan baalalkeena ku faafinay New Delhi iyo Kolkata waxayna ka shaqeynayaan mitirro kala duwan oo Hindiya ah oo leh rabitaan wanaagsan iyada oo gacan ka heleysa Wasaaradda Dalxiiska, Dowladda Odisha iyo Dawlada Hindiya.
Dhamaantigayga ugu fiican dhammaantiin iyo rajadaada ku soo dhawow Odisha